SUJET: Fa maninona no lasa mandoa vola be?
Fa maninona no lasa mandoa vola be? Il y a 3 Taona, 8 Volana Karma: 0
Nisy fotoana maimaimpoana ny fitsaboana aretina azo avy amin'ny fitaovam-pananahana. Izao mitaraina ny olona fa handoavana vola izany no lasa lafo ny sarany. Fa dia nahoana loatra re? sa nitsoaka ny mpamatsy vola?
Hitsambikina avy hatrany any amin'ny :Ndao, ento ny resakao!!!... MSM...... Fivavahana...... Fomban-drazana...... Fiainana amin'ny ankabobeny...... Resaka tsy voa sokajy... Firaisana & fiarovana...... Resaka manodidina ny SEXE......... Passif ou actif...... Fiarovana sy toro-hevitra......... Tsy tokony hampataotra... Vaovao samihafa...... Vaovao eto an-toerana......... Ny MSM sy ny firenena...... Vaovao maneran-tany......... Mister Gay... Fandrosoana...... MSM sy ny informatique......... Toro-hevitra informatique...... Haingo, bika, mozika,sns…......... Isika!!!!......... Fikarakarana ny tarehy...... Resaka hafa mihitsy manodidina ny fandrosoana......... Dihy... Zo sy Lalàna...... Zonao fa tsy angano angano...... Allo fanantenana... IST- VIH...... Aretina tsy misomonga!!!!...... Fakana RA...... VIH...... Fampiofanana